“Theory of Everything” Mifantoka amin’ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy
“Theory of Everything” Mifantoka amin'ny Global Voices
Voadika ny 19 Oktobra 2017 4:58 GMT
( Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aprily 2005)
Mahazo fitia manerana ny tontolon'ny bilaogy ilay fandaharana “Theory of Everthing” (Foto-pahalalàna ny zavatra rehetra) ao amin'ny fampielezampeo atolotr'i Ben Walker – Mark Frauenfelder ao amin'ny Boing Boing nampitaha azy io an-karavoana tamin'ilay iray lafatra This American Life an'i Ira Glass, iray amin'ireo fandaharana tsara indrindra azo raisina amin'ny fampielezampeo Amerikàna.
Ny fandaharana farany indrindra nataon'i Ben azo notrohana tamin'ny endriny mp3, dia nokarakaraina ho toy ny ampahany amin'ilay Fifandrimbonan'ireo Fampielezampeom-Bahoaka 2005, ezaka iray goavana ho fandrisihana ireo mpamokatra fandaharana amin'ny fampielezampeom-bahoaka mba hamokatra andiam-pandaharana momba ny lohahevitra iray – amin'ity taona ity, “ny fanontoloana” – izay ho alefa amin'ireo tobinà fampielezampeo ao Etazonia manomboka ny 16 hatramin'ny 22 May. Jeren'i Ben raha toa ny hoe ‘aterineto ho an'ny rehetra’ ka tena izay tokoa, ary asongadiny ireo mpiaramiasa maro amin'ny Global Voices – Isaac, Jeff, Ory, Hossein, Rebecca ary izaho – miresaka momba ireo fomba azon'ny aterineto anampiana ny tontolo ho lasa liana kokoa amin'ny manodidina azy. Ilay andiany dia miafara aminà antsafa somary lavalava niarahana tamin'i Isaac, izay miresaka amin'ny antsipirihany ny fanivànana ny aterineto sy ny fitantavanana azy ao Shina.
Tena fotoana iray sarobidy ny mandre ireo feo sasantsasany an'ireo olona miasa ho an'ny Global Voices. Ary raha toa ianao ka mpamaky avy any Etazonia, aza misalasala ny miantso ny fampielezampeo any aminareo sy mangataka azy handefa ny “Theory of Everything” – azo raisina ao amin'ny The Public Radio Exchange – mandritra ilay herinandron'ny Fiarahamiasan'ireo Tobim-pampielezampeom-Bahoaka.